Golaha Muslimiinta Faransiiska oo afka furtay . – iftiin fm
Golaha Muslimiinta Faransiiska oo afka furtay .
October 27, 2020 October 27, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Golaha Muslimiinta Faransiiska ayaa daboolka ka qaaday in muslimiinta ku nool wadankaasi fransiiska aysan dhibaatooyin kala kulmeen gudaha ee dalkaasi
Golaha Muslimiinta Faransiiska ayaa sheegay in dadka haysta diinta islaamka aysan wax dhibaato ah la kulmeen , xilli uu meel adag gaaray khilaafka u dhexeeya xukuumadda Paris iyo qaar kamid ah dalalka Muslimiinta.
Hadalka golahaas ayaa ku soo aadaya kadib markii madaxweynaha Turkiga , Rajab Tayib Erdogan uu sheegay in dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda yurub ay la kulmaan dhibataooyin xoogaan, isla markaana ay marayaan xaaladdii haysatay Yuhuudda ka hor dagaalkii labaad ee dunida.
Madaxweyne Erdogan ayaa ugu baaqay shacabkiisa inay joojiyaan iibsashada alaabaha lagu sameeyo Faransiiska, waxaana uu ka dalbaday Midowga Yurub inuu wax ka qabto ajandaha Macron ee Islaamka ka dhanka ah, waa sida uu hadalka u dhigaye.
← Cidamada booliska Lodwar oo dadka badan xabsiga uu taxaabeen .
Dowladda Belgium oo ugu baaqday dhaqaatiirta qaban COVID -19 in ay shaqada ay dib ugu labtaan . →